→ Dhawunirodha WhatsApp yemahara ye iPhone, iPad, Mac kana PC | IPhone nhau
Dhawunirodha WhatsApp yemahara Zviri nyore kwazvo, nekuti parizvino, iko kunyorera kuri mahara zvachose kune ese mapuratifomu. Ndicho chikonzero chikuru chekubudirira kwayo, pamwe nemukana wekuwanika pamazana emamiriyoni emidziyo kutenderera pasirese. Nekudaro, isu tinoda kukupa iwe ruoko kuti uzive kuti sei gadza WhatsApp mahara nenzira yakapusa, nekuda kwevadzidzi vedu vakazvipira. Naizvozvo, tora mukana wemamenyu edu uye zvikamu zvakasiyana kuti uwane iyo dzidziso iwe yaunoda, isu tinokupa iwe neruzivo rwese rwaungangoda kuitira kuti iwe usarasikirwe nhanho imwe chete mukati mekumisikidza.
Uye zvakare, WhatsApp ine yakakosha yemajoni evanjiniya kumashure kwayo, asi kwete chete zviri pamutemo, asi zvakare zvisiri pamutemo, saka shanduro dzakashandurwa dzeWhatsApp dzaigona kushaikwa, dzinozivikanwa seyakakurumbira WhatsApp uyezve, application yeWhatsApp inotibvumidza kuwana zvimwe zvakawanda kubva mairi, sezvo ichisanganisira mabasa anoshamisa asina application yekutanga, ndosaka tichizokubatsira kurodha WhatsApp Plus mahara zviri nyore pane chako chimbo iyo yekushandurwa inonyanya kufarirwa yeakakurumbira mameseji mutengi mune yehunyanzvi yezvinhu.
1 Nakidzwa WhatsApp pane chero chishandiso
2 Isa WhatsApp paPC
3 Chii chinonzi Whatsapp?
4 Unogona kugara uchigadzirisa WhatsApp
5 WhatsApp's encryption system
6 WhatsApp yachinja hupenyu hwedu
6.1 Dzimwe nzira kune WhatsApp
7 Ziva kuziva WhatsApp Plus uye ayo akasiyana
8 WhatsApp mune dzimwe nyika
9 Izvo zvinhu zvawaisaziva nezve WhatsApp
Nakidzwa WhatsApp pane chero chishandiso
Nyaya ya WhatsApp ye iPhone zvinoshamisa. Iyo Apple chikuva ndiyo iyo yakabereka WhatsApp semeseji mutengi, yakasvika muna 2010 paIOS App Store nemutengo we € 0,99, uye izvi zvakakusimbisa iwe sevhisi yeupenyu, ndokuti, iwe wanga usina chikonzero chekumutsidzira WhatsApp yemahara, asi WhatsApp yaigara ichishanda mushure mekutenga kwekutanga. Gare gare WhatsApp yakave yemahara kudzoka mu2013, zvisinei, yakave sevhisi yegore ese yekunyorera, zvakadhura € 0,99 kwegore rebasa. Chinhu chekuti mushure mekuwanikwa kweFacebook chabviswa zvachose, ikozvino kurodha pasi maWhatsApp mahara kunogoneka, uye nariini.
WhatsApp sezviri pachena yakavhurwa paBlackberry Zvakare, kunyangwe hazvo nhasi iri isisitwa system nekuda kwekutsakatika kwekambani, WhatsApp iri kuramba ichishanda zvizere uye yemahara mune ino inoshanda system. Kunyangwe yaive neBBPin semukwikwidzi mukuru mune iyi kesi, WhatsApp yakwanisa zvakare kutonga iyo system pamadiro, uye vazhinji vashandisi vakasarudza kusarudza mukurumbira wekutumira mameseji mutengi pamusika, isu hativape mhosva. BlackBerry yakagadzirirwa chaizvo izvo, ayo epanyama makiyi anopa typing kumhanya uye kupfava izvo zvimwe zvishandiso zvisingasvike.
Izvo hazvigone kupotsa futi WhatsApp pane Android, ndiyo inonyanya kushanda sisitimu pamusika, inotonga nezve 70% yemidziyo yenhare kutenderera pasirese, saka WhatsApp ine simba pane Android pane chero system inoshanda. Iyi chikuva yaive yekutanga mairi tora WhatsApp yemahara Izvo zvaive zvakare zvichikwanisika kumutsidzira kunyoreswa kwechikumbiro hakuna kunyanya kunetesa paApple, sezvo mazuva aifamba nekusvikirwa kwakaitwa zvekare uye kuvandudzwa kwegore rimwe kwakabuda pasina. Dhawunirodha WhatsApp yeApple Zviri nyore sekuenda kuGoogle Play Store uye kutsvaga pakati pezvishandiso zvakanyanya kurodha pasi, zvinogara zviripo uye zvichagara zviri pakati pekutanga.
Izvo zvinoenda kumapiritsi akachenjera, download WhatsApp yepiritsi Izvo zvinokwanisika, uye isu tinowana dzimwe nzira dzakawanda, kunyanya kana mudziyo uri mubvunzo unomhanyisa iyo Android sisitimu inoshanda. Tine mukana wekuiisa uchishandisa SIM kadhi mune iyo piritsi pachayo, kana kutora mukana weimwe SIM kadhi kubva kune mbozhanhare. Uye zvakare, iyo vhezheni yeWhatsApp Web inogona kushandiswa pamahwendefa uchishandisa desktop modhi mubrowser yatinoda, saka tichava neshanduro yeWhatsApp pahwendefa pasina kushanda kwakanyanya.
Nekudaro, iyo inozivikanwa kwazvo pamahwendefa iri chaizvo iyo iPad. Mune ino kesi, simudza WhatsApp natively, ndiko kuti, sekushandisa, zvakaoma kwazvo, uye isu tinogona chete kuita kufamba uku tichishandisa chishandiso chakadai seJailbreak, zvisinei, semapiritsi eAroid, zvinokwanisika kushandisa iyo WhatsApp Web sevhisi nyore uye inowanika kubva kune chero browser pane yedu iPad, kuti tikwanise kushandisa Yemahara WhatsApp pane iPad Pasina kuyedza kwakanyanya, isu tinongofanirwa kuwana iyo WhatsApp Web sevhisi kubva kuSafari browser pachayo uye sarudza desktop desktop mode.
Isa WhatsApp paPC
Muna Chivabvu 2016, takave nenhau dzekuti WhatsApp yaive yasarudza kuvhura vhezheni ye WhatsApp yeMacNekudaro, isu tinogona kukopa iyo WhatsApp kunyorera zvakananga kuMac yedu nekukurumidza uye kutaura nevose vatinosangana navo nechero nyaradzo yekhibhodi uye nechidzitiro checomputer yedu, ingave iri laptop yakaita seMacBook kana desktop seMac, yakakosha chinhu ndechekuti isu tinogona kutaurirana neshamwari dzedu uye nevadiwa nekuda kwekushandisa kwe WhatsApp yeMac.
Asi hazvisi zvese zvinogara pano, uye ndiko iko kushandiswa kwe Whatsapp ye pc yakasvika panguva imwe chete. Chero komputa ine sisitimu inoshanda yeWindows 8, Windows 8.1 kana Windows 10, inogona kudhawunirodha WhatsApp yePc uye woimhanyisa natively senge chero chimwe chirongwa. Iyo chete yakashata poindi ndeyekuti iri nyore WhatsApp Webhu mutengi, uye kwete rakasiyana application. Nekudaro, isu hatigone chete kutaura nevese vatinosangana navo senge vhezheni yeWhatsApp ye iPhone neWhatsApp yeApple, asi tinokwanisa zvakare kutumira magwaro kune vatinosangana navo, uyezve, govana mafoto atinawo paPC yedu.
Chii chinonzi Whatsapp?
WhatsApp ndiyo inonyanya kufarirwa kutumira mameseji munguva pfupi yapfuura. Kwete chete iko kushandiswa kunonyanya kushandiswa pane mazhinji mafoni kutenderera pasirese, asi zvakare zvachinja matauriro atinoita nemunhu wese, iyi application yarerutsa kune yakanyanyisa mukana wekutumira mameseji kune vatinosangana navo. Muchokwadi, isu tinogona kutofunga kuti matauriro atinoita nevatinoda zvachinja, zvachinja zvakanyanya nekufamba kwenguva, asi iko kusara kwakangofanana, tumira mameseji nekukurumidza.
Iyo yaifungidzira kuchengetedza kwakakosha mumabhiripiti evanhu vese, nekuti neiri kukura tekinoroji ye3G maapplication mazhinji akatanga kuwedzera, zvisinei, hapana yainyanya kuita, nyore kushandisa uye nekukurumidza kunge WhatsApp. Ndokusaka, vakakurumidza kuveza gomba ndokutsiva iyo BlackBerry PIN. Zvaive nyore kutumira isingagumi uye isina muganho nhamba yemameseji munguva chaiyo, mukuwedzera, nguva pfupi mushure mekunge yabvumidzwa kugadzira mapoka evanosangana mune imwecheteyo chat, pamwe nebasa rekutumira mafoto, kukwidza WhatsApp kumusoro kumusoro mune yese mari. zvinyorwa uye kubudirira, chero chikuva.
Iko kunyorera kwakatanga kusvika paApple App Store muna Ndira 2010, saka, izvozvi chikumbiro chave kungopfuura makore matanhatu ekuberekwa. Asi nekufamba kwenguva yakawana kuenderana kweApple, BlackBerry, Windows Runhare, Symbian uye kunyangwe S40 Series. Mazhinji eaya masisitimu anoshanda akanyangarika nepo WhatsApp ichiramba yakakwidza kumusoro. Ndosaka tisingakwanise kusahadzika kubudirira kwayo, WhatsApp yakashandura nyika yekutumira mameseji sekuziva kwedu.
Zita rekushandisa rinobva mukutaura kweChirungu "Chii chiri kuita?", kwaziso inodziya mumafashoni pakati pevechidiki. Nezvese uye nezvazvo, izvo zvagara zvichingogara zvisingagumi rave iro green logo, meseji chibharumu icho chine runhare mukati, yakapusa asi yakanangana, chiratidzo chinozivikanwa pasi rese, sezvingave chero chimwe chechiratidzo chikuru, uye iri WhatsApp iri chikamu chehupenyu hwezuva nezuva hwemazana emamiriyoni evanhu kutenderera pasirese, senge iwe, uri kuverenga isu. Ndokusaka iwe wauya kune ino peji, nekuti isu tinoda kukudzidzisa iwe zvese nezve inoyevedza kunyorera, kuitira kuti iwe uwane zvakanyanya kubva mazviri uye unakirwe uchitaura neyako. Unoziva here kuti pane vanhu vatotambura WhatsApp kupindwa muropa?
Unogona kugara uchigadzirisa WhatsApp
Kugadziridza WhatsApp kuri nyore, chero chikuva chako, iwe unofanirwa kuenda kuIOS App Store uye utarise mumatsva kuti uzive kana inguva kana kwete gadziridza WhatsApp. Imwe yenyaya dzakasarudzika dzeWhatsApp yeIOS ndiyo inonzi "bug fixes", iyo inowanzo kugadzirisa mashandiro ese echishandiso, asi ichivanza dzakawanda dzenhau dzinozoonekwa munguva pfupi inotevera. Kune rimwe divi, mune iyo nyaya yeApple, iro basa rakafanana, isu tinofanirwa kuenda kuGoogle Play Store, uye patinongopinda, ichatizivisa nezve maficha anoda iyo yekuvandudza.
WhatsApp's encryption system
Nekuda kwekukura kwekuchengetedzwa kunodiwa nekufamba kwenguva, WhatsApp yakasarudza pakutanga kwegore ra2016 kuisa meseji yekunyorera system. Kana zvichikwanisika, mafoni uye mameseji anotumirwa akanyorwa-kuguma-kumagumo akavharidzirwa, zvinoreva kuti WhatsApp nevanhu vechitatu havagone kuteerera kana kuverenga. Chiziviso chidiki chekuchengetedza chinozoratidzwa pese patinotanga kutaurirana nemushandisi mutsva kutizivisa izvo kutaurirana kwedu kwese kuri kuchengetedzwa uye kwakanyorwaWhatsApp yakabheja zvakanyanya pakuchengetedza uye zvakavanzika, uye hachisi chinhu chatinogona kuzvidza, nhasi zvakakosha zvakanyanya kuchengetedza data redu rakachengeteka.
WhatsApp yachinja hupenyu hwedu
Zvinoenderana nezvazvino zvidzidzo, 53% yevaSpanish vane pakati pe5 ne50 WhatsApp inotaura pazuva, uye hachisi chinhu chinotishamisa, vazhinji vedu tinoshandisa chishandiso senzira yedu huru yekutaurirana, huwandu hwayo hwevashandisi pasi rese hunopa kutenda kwakanaka kwazviri. Zvichakadaro, 90% yevashandisi veWhatsApp vashandisi vanoshanda, ndiko kuti, vanoshandisa sevhisi kanopfuura kamwe pazuva, vachiiita nzira chaiyo uye huru yekutaurirana. Iyo yakanyanya kushandiswa pakarepo kutumira mameseji ine 98,1% yevashandisi vese, pamusoro pemakwikwi akaita seTeregiramu, Skype kana Facebook Messenger.
Muna Kukadzi 2016, WhatsApp yakaputsa chipingamupinyi chevashandisi bhiriyonisevhisi yekutumira mameseji inodarika vanyoreri veFacebook Messenger nemamirioni mazana maviri, semuenzaniso. Zvinoenderana neazvino manhamba, maSeva eWhatsApp anobata mameseji anosvika mamirioni makumi mana nemazana mana emamiriyoni uye mavhidhiyo anopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu pazuva, mutoro wakakosha, uyo unopupurira kufarirwa kwemutengi wemeseji uye nemamiriro ari kuchinja. , vadikanwa uye nevanhu vese vakatikomberedza.
Dzimwe nzira kune WhatsApp
Nekudaro, kunyangwe iri inonyanya kushandiswa pasi rese, kune misika inozviramba, senge China, kwavanoda WeChat, South Korea, uko kutonga Kakao Talk, kana Japan, kupi mutsetse inoramba ichichengetedza nzvimbo yayo yepamusoro. Nekudaro, nenyaya yekuti iko kunyorera kwave kusununguka kwehupenyu uye kuvhurwa kweWhatsApp Web, vazhinji uye vazhinji vari kujoina.
Ziva kuziva WhatsApp Plus uye ayo akasiyana
Kunyangwe zvisiri kuwanikwa zveIOS (kunze kwekunge uine jailbreak), akawanda WhatsApp Plus kugadziridzwa izvo zvakagadzirwa nevakagadziri vakasiyana. Semuyenzaniso, WhatsApp Uyezve Holo, iyo yaive vhezheni yeWhatsApp Plus iyo yaibvumidza kushandiswa kweiyo Holo interface kune avo maAroid madhizai anga asati avandudzwa. Iyi Holo vhezheni yakamiswa pakupera kwegore rapfuura nekuda kwekuti iwo akawanda maApple madhizaina akange atove neakafanotaurwa interface. Nekudaro, mamwe manyuko akabuda, senge WhatsApp Uyezve Jimods, kuchinjwa kweWhatsApp zvichibva pane imwe yenyaya dzayo dzichangoburwa, ichiita imwe yeshanduro dzakatsiga dzatinogona kuwana pamambure.
Munzvimbo ino iwe unowana zvese zvakakosha ruzivo, ese eWhatsApp ekugadziridzwa, iwo mavhezheni ekutanga, pamwe neakareruka uye anowanikwa ezvidzidzo zvekudzidzisa kuti iwe ugone kushandisa zvakanyanya Mahara whatsapp. Izvo zvakakosha kuti isu tizive zvakadzama kunyorera sekunyanya kushandiswa seWhatsApp, uye pamusoro pezvose zvatinoziva kukwana kwayo, mitengo uye zviripo. Kushandiswa kwehunhu uhwu kunogona kuve munondo unocheka kumativi maviri zvichienderana nemamiriro ezvinhu, saka tinozvichenjerera nekungwarira uye nehunyanzvi hwakawanda.
WhatsApp mune dzimwe nyika
Nzira iyo WhatsApp yakaputsa miganhu yenzvimbo yakakosha zvakare kutaurwa, mubvunzo unomuka wekuti Ini ndinogona kushandisa WhatsApp kunze kwenyika yangu, uye mhinduro ndeyekuti hungu. WhatsApp ichashandira mahara chero kupi kana chishandiso chakambomisikidzwa uye chine internet yekubatana, ingave 3G kana WiFi. Uye zvakare, hatizorasikirwi nemushandisi wedu kunze kwekunge isu tikabvisa kunyorera, saka WhatsApp iri nyore kushandisa mune chero nyika, tinogona kuramba tichikurukura nevatinoda chero kwatinenge tiri, isu tinongoda internet yekubatanidza.
Imwe mukana wakanaka weWhatsApp, ndewekuti tinogona shandisa yedu imwechete WhatsApp account chero iri kadhi izvo zvatakaunza. Ndokunge, semuenzaniso, isu takaita kuti WhatsApp yedu iite nekadhi renyika, asi tichazoenda kunze kwenyika uye tinosarudza kubhadhara madhata ari munyika yekuenda, isu tinongofanirwa kuisa kadhi uye kuramba tichinakidzwa izvo, sezvo vedu vanofambidzana Vanogona kuramba vachikurukura nesu kuburikidza nenhamba yedu yakapfuura yakabatana neWhatsApp, nzira yakanaka yekuenderera mberi uchitaura neshamwari dzedu patinenge tichigara kunze kwenyika, kunyangwe tiine imwe nhamba yenhare ipapo yekutora mukana weiyo nyika mitengo.
Izvo zvinhu zvawaisaziva nezve WhatsApp
WhatsApp yakazvarwa muna2009. Kudzoka muna2014, WhatsApp yakawanikwa neFacebook mukutsinhana nemamiriyoni mazana manomwe emadhora, izvo zvimwe iwe zvausingazive ndeye zita revasiki veWhatsApp, Jan Koum naBrian Acton, vakasiya Yahoo muna 2009 ndokupa mabasa avo kuFacebook neTwitter, makambani ese akavaramba, uye havazive kuti vanozvidemba zvakadii, uye ndezvekuti Facebook ingadai yakachengetedza mabhiriyoni emadhora dai ivo ivo. Kwete kuhaya kwakashandira ivo vakasika zvinoshamisa, avo vakave mabhirionea nenzira yehumhare zvakanyanya.
Chimwe chinhu chaungave usiri kuziva icho icho WhatsApp haisati yamboshandisa kana kobiri rimwe kushambadzaSezvo kambani isina kumbobvira yaisa kushambadzira chero kupi kuti ikwidziridze app yayo, kubudirira kwaive kutaura kwemuromo. Uye zvakare, iri kuita kuti vashandisi varasikirwe nemari yakawanda, kutanga nekubvisa maSMS uye ikozvino zvakare kuwedzera mukana wekuita VOIP mafoni kuburikidza neWhatsApp. Nekudaro, vhidhiyo yekufona zvakare iri munzira muWhatsApp, izvo zvinogona kureva kumwe kunonakidza kutendeuka munzira yatinotaurirana nayo, WhatsApp inoshandura zvese zvainobata, uye ndezvekuti iro bhiriyoni-madhora emauto evashandisi vanozoitevera ikoko kwese kwandinoenda.
Tinovimba unowana chero chauri kutsvaga nezvacho wasap Pano, isu tine zvese zvaungangoda zvine chekuita neyakanakisa meseji kunyorera pamusika. Kana uchida download whatsapp mahara, pano iwe unowana zvese zvaunoda.